paramende yeZimbabwe. Nhengo dzeparamende dzakawanda dzakavhotera bhiri repiri rekuvandudzwa kwebumbiro remitemo.
Danho rakatorwa nenhengo dzedare reparamende svondo rino rekupasisa bhiri repiri rinobvumidza kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika, kana kuti Constitutional Amendment Bill (No.2), rakasimudza mutauro mukuru muvanhu, vakawanda vachipa maonero akasiyanasiyana.
Imwe nhengo yeZanu PF iri kuBritain, Doctor Simba Mavaza, vanoti zvakaitwa nenhengo dzavo muparamende pamwe nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa reMDC-T zvekutambira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika rakaumbwa muna 2013, chinhu chakanaka sezvo izvi zvichichengetedza zvido zveveruzhinji.
Doctor Mavaza vanotiwo danho iri rinopa mutungamiri wenyika mukana wekushandisa masimba avo zvisina anokanda zvipanera mumavhiri pakusarudza vatongi vematare, vachiti zvaiitwa zvekubvunzurudzwa kwevanenge vachida basa sevatongi vematare zvinozvidza vatongi ava.
Asi munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva rePatriotic Zimbabweans, VaPishai Muchauraya, vanoti zvakaitika izvi mucherechedzo wekufa kwehutongo hwejekerere, uye zvinoratidza kuti Zanu PF iri kushandisa masimba ayo muparamende zvisizvo nekuti bumbiro idzva iri ranga risati rambotanga kushandiswa rose.
VaMuchauraya vanoti izvi zvinoita kuti vana veZimbabwe vakawanda vashaye chivimbo nehutungamiri hwavo kuti vanokwansa here kuchengetedza bumbiro renyika. vanoti zvadii kuti bumbiro remitemo rimboramba riripo kusvika vanhu vese varijaira.
Nhengo dzinosvika zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakatambira kuvandudzwa kwebumbiro uku, kuchitiwo makumi maviri nembiri dzichipikisa.
Zvinonzi zvinofanirwa kuvandudzwa mubumbiro iri zvinosanganisira mutemo wekusarudza anokwikwidza ari mutevedzeri weanozove mutungamiri wenyika, kana kuti running mate, mutemo wekusarudzwa kwevatongi vematare epamusoro, kuwedzerwa kwenguva yemutemo unopa zvigaro kumadzimai pasarudzo kana kuti women’s quota uyo wanga uchiguma kushanda muna 2023, uyewo kuiswa kwemutemo mutsva unopa zvigaro gumi kune vechidiki musarudzo.
Bhiri iri rave kuzoenda kudare reseneti uko rinotarisirwa kupasiswa zvakare sezvo Zanu PF iine nhengo dzakawanda ikoko.
Kana rakapasiswa neseneti rinenge rave kuzoenda kumutungamiri wenyika kuti aise runyoro rwake kuti uzove mutemo.
Hurukuro naVapishai Muchauraya pamwe naDoctor Simba Mavaza